::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather म पद दोहोर्याउन्न, अध्यक्षको स्वभाविक दावेदार हुँ : कुमार पन्त:: Rojgar Manch ::
कुमार पन्त, उपाध्यक्ष, एनआरएनए
शनिवार, २०७३ फाल्गुन १३ गते ००:१७
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा सँधै देखिने अनुहार । कुरा भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्तित्व । मेहनेत र इमान्दारिताले विदेशमा सफलता चुम्दै गएको नेपाली युवा । हो, उनै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका उपाध्यक्ष कुमार पन्त । सन् २००४ ताका जर्मनीको एक च्याप्टर मेम्बरबाट एनआरएनको अभियानमा छिर्नुभएका पन्त अहिले विश्वभरका एनआरएनको नेतृत्व नै संहाल्न कस्सिनु भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जर्मनीको बोर्ड मेम्बर हुँदै २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य, २०११ मा युरोप क्षेत्रीय संयोजक, २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महासचिव हँुदै सन् २०१५ बाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएका पन्त अहिले नेतृत्वका लागि अब्बल हुनुहुन्छ । पदीयरुपमा स्वभाविकरुपले उपाध्यक्षबाट अगाडिको अध्यक्ष पदमै पुग्ने मान्यतालाई जसरी भएपनि पुरा गर्ने उहाँको लक्ष्य रहेको छ । एनआरएन अभियानको वर्तमान अवस्था, भावी योजना तथा नेतृत्वको आकांक्षालाई समेटेर रोजगार मञ्चले उपाध्यक्ष पन्तसँग कुराकानी गरेका छौ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा तपाई लाग्नु भएको लामो समय भइसकेको छ । तपाई उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एनआरएनको यो अभियान अहिले कहाँसम्म पुगे जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो यो अभियान झण्डै साढे तेह्र वर्षदेखि जारी छ । विदेशमा बस्ने ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरुका आशा र भरोसा बनेको छ गैरआवासीय नेपाली संघ । विशेषगरी मुलुकको आर्थिक उन्नतीका लागि सबै नेपालीहरुको जुन सपना छ समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा गैरआवासीय नेपालीहरु तयार छन भन्ने सन्देश अहिले सबै साथीहरुले दिइरहनुभएको छ ।
तर यस चाहनालाई तपाइहरु देश बाहिर बसेर कसरी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ रु फेरि तपाईहरु स्वदेशको जिम्मेवारीबाट पन्छिएर विदेशमा नै रमाउने गरेको आरोप लाग्छ त ?
राष्ट्रियता भन्ने कुरा भुगोलमा सीमित हँुदैन । अरु मुलुक हेर्ने हो भने पनि विदेशी डायस्पोराले देश बनाएका इतिहास थुप्रै छन् । साउथ कोरिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुक हेरेपनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । संसारको जुन कुनामा रहेपनि हाम्रो मन मस्तिष्क नेपालमै छ । हामी तन, मन, धन सबै मुलुकको समृद्धिका लागि दिन तयार छौ । हामी देशको विकासका लागि प्रत्यक्षरुपमा सहभागी हुन चाहन्छौ । हामी भागेका छैनौ मौका मिल्नासाथ नेपालमा आइरहेका छौ र केहि गरिरहेका छौ । जुन भुगोलका कारण टाढा रहनुलाई आजको युगमा कुनै अर्थ राख्दैन ।
हुन त एनआरएनको स्थापना भएदेखिनै विश्वमा भएका नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्छ र नेपालको समृद्धि तथा बिकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट केहि न केहि गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनुभएको छ । काम भन्दा पनि एनआरएनहरुले हल्ला बढि गर्दछन् भन्ने गरिन्छ, तपाईहरुले कस्तो योगदान दिइरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले पनि रोजगारी अभावले दैनिक १५ सय हाराहारीमा नेपालीहरु विदेशिरहेका छन् । अब देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर गैरआवासीय नेपाली साथीहरु मुलुकमा लगानी भित्राउन ब्यक्तिगतरुपमा लागिरहनुभएको छ । कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ क्षेत्रका साथै थुप्रै उद्योगधन्दामा लगानी गरिरहनुभएको छ । एउटा कुरा गैरआवासीय नेपालीहरुले चाहेर र गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । हामीले संस्थागतरुपमा गैरआवासीय नेपालीहरु लगानी गर्न कत्तिको इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर ४ वर्षअघि एउटा टेस्ट प्रोजेक्ट ल्याएका थियौ । संयुक्तरुपमा एउटा इन्भेष्ट गरौन त भनेर हाइड्रोपावरमा लगानी गरौ भनेर साथीहरुका बीचमा गएका थियौ । हामी ९ सय साथीहरु त्यसमा सहभागी बन्यौं । लमजुङको दोर्दी खोलामा २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अहिले भैरहेको छ । यो हँुदै गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघले यस्तै अन्य आयोजनाहरु शुरु गर्न लागेको छ की छैन भनेर सोध्ने साथीहरु हजारौ भैसक्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने साथीहरुलाई सामूहिकरुपमा नेपालको लागि केहि गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको र संस्थामार्फत केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको पाएका छौ ।
दुःखद कुरा २ वर्षअघिको विनाशकारी भुकम्पका कारण अहिले हाम्रा सबै इनर्जी त्यसमै केन्द्रित गराउनु परेको छ । अहिले गोरखा जिल्लाको लाप्राक गाँउमा नमुनाबस्ती निर्माण गरिरहेका छौ । संघको आफ्नै भवन बनाउने काम पनि चलिरहेको छ । शंखमुलको वागमती किनारमा नमुनापार्क बनाइरहेका छौ । यी कामहरुले हाम्रा लगानी भित्राउने योजना केहि प्रभावित बनेको छ । पुर्ननिर्माणको काम सकिएपछि हाम्रा इनर्जी फेरि तीनै काममा लगाउने छौ । सयुक्त लगानी भित्र्याएर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा हामी फेरी लाग्छौ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अगुवाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत लगानी भित्राउन संघलाई प्रयोग गरेको भनिन्छ, स्वतस्फुत लगानी स्वदेश भित्रिरहेको छ त ?
कसैले नेपालमा लगानी भित्राउन चाहन्छ भने त्यो त स्वागतयोग्य कुरा हो । मुलुकलाई लगानी चाहिएको छ चाहे त्यो संस्थागत रुपमा होस या व्यक्तिगत रुपमै किन नहोस । हामी नेपालमा लगानी भित्राउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौ । धेरै मानिसहरुले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त देश होइन र यहाँ वातावरण छैन भनिरहदा गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले यसलाई चिर्ने काम गर्नुभएको छ । थुप्रै गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले यहाँ लगानी गरेर मुनाफा लिइरहनुभएको छ । यसलाई हेरेर स्वतस्र्फुतरुपमा धेरै साथीहरुले लगानी भित्राइरहनुभएको छ र संस्थागतरुपमा पनि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश हो, यहाँ लगानी गरेर नाफा लिन सकिन्छ भनेर हामीले साथीहरुलाई कन्भिन्स गरिरहेका छौ ।
यता वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई एनआरएनएले अझै पनि केहि गर्न नसकेको हो रु अर्थात खाडी र मलेसियाका नेपालीहरुका लागि एनआरएनले प्राथमिकतामा नराखेकै हो रु तपाई संस्थाको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ के गरिरहनुभएको छ त ?
नेपालीहरुले विदेशी भूमिमा धेरै दुःख कष्ट गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको हकहितका विषय, कतिपय अंगभंग भएर रहनुभएको छ भने कतिपयको लास समेत ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ, यो साँचो हो । यी सबै कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौ । हामीले भर्खरै मात्र पनि नेपाल सरकार र कर्मचारी संचयकोषसँग सहकार्य गरेर विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुका लागि केहि गर्ने जमर्को गरेका छौ । धेरै साथीहरु विदेशमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट फर्किएपछि बेरोजगारी नै बस्नुपर्ने, आयआर्जनको श्रोत नहुनु, काम गर्ने वातावरण नदेख्नु लगायतका बिषयलाई चिर्नका लागि संचयकोष जस्तै गैरआवासीय नेपाली साथीहरुको पनि त्यस्तै कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सहकार्य गरिरहेका छौ । त्यसैगरी विदेशमा अंगभंग भएका नेपालीको उद्धारका लागि एउटा छुट्टै राहतकोष नै बनाएका छौ र त्यस राहतकोषमा रकम संकलन हुने कार्य भैरहेको छ । यसमा रकम थप्न नेपाल सरकारलाई पनि हामीले घच्घच्याइरहेका छौ । हामीले त्यो मात्र होइन अबका दिनमा विदेश गैसकेपछि त्यहाँ आर्जन गरेको सीप स्वदेशमा फर्किएपछि मुलुकको हीतका लागि र आफ्नो आर्थिक अवस्था सुर्धानका लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर संघले ध्यान दिइरहेको छ ।
विशेषगरी संघको नेतृत्व खाडि मुलुक तथा मलेसिया बाहेकका गैरआवासीय नेपालीको हातमा पुगिरहँदा पनि यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई संघले राम्रोसँग सम्वोधन नगरेको भन्ने आरोप गलत हो त ?
हामीले आफ्नो ७० प्रतिशतभन्दा बढी इनर्जी खाडी मुलुक तथा मलेसिया क्षेत्रमा रहेका नेपालीको हकहित र अधिकारका निम्ति तथा उहाँहरुको ज्ञान तथा सीपको सदुपयोग गर्नमा खर्च गरिरहेका छौ । भुगोलले जहाँ बसेपनि हामी सबै गैरआवासीय नेपाली हौ त्यसो भएको हँुदा खाडी क्षेत्रका साथीहरु उपेक्षित भएको भन्ने होइन र हुनुहँुदैन भन्ने मान्यतामा हामी सचेत छौ । विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली भन्नासाथ ठुलो संख्याका साथीहरु खाडि मुलुक तथा मलेसियामा हुनुहुन्छ त्यहाँ भएका साथीहरुको सक्रियता नभइकन यो संस्था बाँच्न सक्दैन भन्ने कुराप्रति हामी एकदमै सचेत छौ । यसैले हामीले हाम्रा सारा इनर्जीहरु त्यतातिरै लगाएका छौ र लगाइरहन्छौ पनि ।
तपाइले ५० भन्दा बढी मुलुक पुगेर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई भेट्दा अनि गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा लाग्दा तपाइले कस्तो अनुभव पाउनु भएको छ रु के रहेछ नेपालीहरुका लागि विदेश ?
अहिले संसारको जुनसुकै कुनामा गयौ भने पनि त्यहाँ हामीले नेपाल भेटिरहेका हुन्छौ । गैरआवासीय साथीहरु भेट्ने बित्तिकै हामी नेपालकै बारेमा कुरा गर्छौ, चिन्ता व्यक्त गर्छौ र देशका लागि प्रभावकारी ढंगले कसरी योगदान गर्न सक्छौ भनेर चर्चा परिचर्चा गर्छौ । साँच्चै भन्नु भन्दा एनआरएनहरुले नेपाल बाहिर नेपाल बनाइरहनु भएको छ । यो संस्थाले दिएको उपलब्धी हो ।
यो अभियानमा लाग्दा तपाईले संघको उपाध्यक्षको कार्यकाल पुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अब भावी नेतृत्वको सवाल पनि उठ्दै छ । एनआरएनहरुमा भित्रभित्रै नयाँ नेतृत्वका लागि सरगर्मी बढ्न थालेको छ, तपाई पनि अध्यक्षको दावी गरिरहनु भएको कुरा सही हो ?
एनआरएनको सुरुवाती दिनदेखिनै म यसमा आबद्ध छु । शुरुवाती ताका क्षेत्रीय समिति भन्ने थिएन काँहि च्याप्टर काँहि लोकल कोअर्डिनेशन काउन्सिल भन्ने थियो । सन् २००४ ताका जर्मनीको अध्यक्षमा दिल गुरुङ र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा राम थापा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले च्याप्टरको कन्सेप्ट जर्मनीबाट शुरु गर्नुभयो सो च्याप्टरमा म पहिला मेम्बर भएर काम गर्न शुरु गरे यसको २ महिनापछि नै संयोजकको जिम्मेवारी पाएर २–३ वर्ष काम गरे । यसपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जर्मनीको बोर्ड मेम्बर हुँदै २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य बने । यस्तै २०११ मा युरोप क्षेत्रीय संयोजक, २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महासचिव हँुदै सन् २०१५ बाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छु । स्वभाविकरुपले उपाध्यक्षबाट अगाडि जाने भनेको अध्यक्षमै हो र नेतृत्वका लागि साथीहरुले पनि भनिरहनुभएको छ । यसमा तयार नहुने भन्ने कुरै छैन तरपनि अहिले यो यो कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा तथा धेरै काम गर्न बाँकी हँुदा अहिलेनै नेतृत्वको कुरा गरिहाल्ने समय भएको छैन तथापी म तयार छैन भन्ने पनि होइन ।
तपाईलाई नेतृत्व सम्हाल्न दिइरहँदा अब यी काम गर्न बाँकी छन् र नेतृत्वमा पँुगे भने यो अभियानलाई यसरी अगाडि बढाउछु भन्ने तपाईका केही योजनाहरु छन ?
नेतृत्वमा पुग्नु–नपुग्नु ठूलो कुरा भएन । जो नेतृत्वमा आएपनि गैरआवासीय नेपाली संघले गर्नुपर्ने २÷३ वटा कुराहरु छन । पहिलो कुरा त भूकम्पको पुर्ननिमाणपछि इन्भेष्टमेण्टका लागि हामीले खुद्रामसिना कुरा गरेर मात्र हँुदैन एउटा मेगा प्रोजेक्ट लिएर आउनुपर्छ । यो गैरआवासीय नेपाली संघको प्रमुख कार्यसूची अनुसार बन्ने छ । दोश्रो यो संस्थामा शुरुको दिनदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने यसको नेतृत्वमा व्यापारीहरु मात्र भएको इतिहास छ । साथीहरुको बीचमा धनीहरुको मात्र क्लब होकी, व्यापारीहरुको मात्र संस्था होकी भन्ने जस्तो पनि परिरहेको छ । यसलाई चिर्नका लागि र संस्थालाई आर्थिक मजबुद बनाएर सामान्य पेशा तथा रोजगारी गर्ने पनि यो संस्थाको अध्यक्ष बन्न सक्छ र नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्दछ । अर्को कुरा ५० लाख नेपाली विदेशमा हुनुहुन्छ तर गत महाधिवेशनसम्म संघमा आवद्ध पञ्जिकृत सदस्य ५० हजार थियो जुन अहिले १ लाख पु¥याउने लक्ष्य छ । अब हामीले ५० लाख गैरआवासीय नेपालीहरुमाझ यो संस्थालाई पु¥याउन सक्नुपर्छ । नेपालमा हुने महाधिवेशनमा विश्वभरबाट आएका करिब हजार नेपालीले छानेकै नेतृत्वले मात्रै सबै नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र संस्थालाई माया गर्ने सबै नेपाली जसले आफु बसेको देश तथा ठाँउबाटै आफ्नो नेतृत्व छान्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ यसले गर्दा पञ्जिकृत सदस्यहरु पनि ठुलो संख्यामा बृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ । जो नेतृत्वमा आएपनि यी कुरा संघको अबको कार्यसूचीमा रहनेछ ।
अबको नेतृत्व मेरै हुनुपर्छ भन्ने तपाईको केहि दावा छ ?
संस्थालाई माया गर्ने मान्छेले मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने कुरा राख्न हँुदैन । तर एउटै पद दोहो¥याउने बिचारमा भने म छैन ।